Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu daabaca ah oo Ilaah raadad, sida aan abid soo martay.
Calaamad Aftonbladet September 28, 1994.
Maanta waa sanad guuradii 25aad ee markabka Estonia hoos badda bari tegey. Iyadoo tan maskaxda, Waxaan rabaa in aan idinla wadaago maraggaygu gaarka ah ee musiibada Estonia ka cutubka la yaab leh ee buugga aan jeclahay habeenkii ugu dheer.
Maanta waa 25 sano tan iyo Estonia ku degtay, iyo 852 qof oo naftooda ku waayay. Kaliya 137 qof oo ka badbaaday.
The M markab rakaab / S Estonia hoos badda bari tegey September 28, 1994 inta ay safarka ka dhiman in ay Stockholm.
Waxaa jiray 989 oo qof on board, kuwaas oo 852 dhintay. Kuwaas oo kala ah, 501 Sweden. 51 Swedish ka badbaaday. Sida oo dhan ka badbaaday 137 oo qof.
musiibada Estonia waa jabtay ugu weyn ee nabadda abid ee biyaha Nordic. Sidoo kale waa mid ka mid ah dhimashada badnaa sida uhelin ka dhacay inta lagu guda jiro 1900 daahay.
safarka ay ku tagayaan Estonia
Laga soo bilaabo buugga habeenkii ugu dheer ee Christer Åberg.
Waxa ay ahayd wax lahaa in ay ka dhacaan, ama halkii, hal wax oo ma dhicin kulanka muhimka ah ee Tranas qaadan kartaa meel. Oo tanu waxay sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu daabaca ah oo Ilaah raadad, sida aan abid soo martay.
Ka dib markii aan helay badbaadiyey, waxaan markii dambe ku tegey laba dugsi Bible. dugsiga labaad Bible ahaa ee Jönköping Pentecostal Church. Magaca ahaa gaaban, Pentecostal Bible College iyo Pastor Leif Svensson ahaa madaxa macalimiinta dugsiga. Dugsiga ayaa run ahaantii waxaa iska Viebäcks kulliyad iyo socday muddo sannad ah. Waxaa muhiim ii ahaa.
Tan iyo markii aan lahaa kalsooni weyn Leif Svensson, waan xajiyey xiriiri isaga la dib markii dugsiga ku dhamaaday ii. ka dibna waxaan loo isticmaalaa in lagu hadda ka dibna u yeedho. On hal mar sida u sheegay Leif in uu ahaa in Midowgii Soofiyeeti ee hore iyo wacdiyey Ciise ku saabsan. Dad badan ayaa heshay Ciise iyo badbaadeen in shirarka, iyo ma waxa ay gabi ahaanba cajiib ah.
ciribta qalbigayga. Waxaan doonayaa in aan la noqon, waxaa Cabaade in maskaxdayda. Laakiin waxaan marnaba yeelan lahaa markii ay u safraan Midowga Soofiyeeti. Muddo ka dib our hadalka kala diri boqortooyadiisa ku toosaa.
Markii aan mar dambe u yeedhay Leif, waxa uu ii sheegay in ay tahay in olole weyn Christian jooga daarta hore ee shuuciga ee caasimada Latvia ee, Riga. Wuxuu weydiiyay hadii aan doonayo inaan ku biiro, oo aan rabay in aan, dabcan. Waxaa mar kale uu ahaa gabi ahaanba cajiib ah: Dad badan ayaa la badbaadiyey iyo awood aan bogsan ee sJags cudurro kala duwan.
Waxa kale oo ay ka dib noqon doono safar labaad ee Riga. kulan Markan in a hall isboorti oo waaweyn. Labada ololayaal ka tagay aragti qoto dheer in aan maanka iyo waxaan doonayay in ay ku lug dhacdooyinka ka badan sida la yaab leh mustaqbalka.
Pentecostal Church ee Ljungby kiro dhowr guri oo haatan waxaan lahaa waqti ku noolaa waxaa been ugu sareysa. Waxa ay ahayd mid aad u weyn, sofiitada la saqaf sloping iyo skylights. Waxay lahaa meel ballaadhan oo jikada aad buu u ifafaalaha iyo alcove ah taas oo run ahaantii ahaa mid ka badan sida qolka yar. Waxaan ku riyaaqay sidaas si fiican ee aqalka, taas oo xataa lahaa balakoonka yar. Markii aan balakoonka istaagay, aan lahaa aragti fiican ee saldhigga, kuwaas oo u dhow ahaa.
In jikada badan oo kiish, halkaas oo aan lahaa aan phone isku tidcan cas, waxaan u bixiyey hal maalin ilaa Leif Svensson. (Tani waxa ay ahayd ka hor inta telefoonada kayd iyo waqti telefoonada mobile '.) Marka sheegay Leif Svensson igu:
"Waxaan haysta olole weyn ee caasimada ah ee Estonia. Waxaan halkaas kula markab rakaab badan oo ka Stockholm tegi doonaa. "
cedhibta mar kale qalbigayga. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa in ay yimaadaan oo ay la socdaan. Waan ogaa sida la yaab leh waxa ay ahaan laheyd maxaa yeelay, waxaan u ahaa ee la soo dhaafey laba ololaha. Laakiin waxaan lahaa dhibaato weyn. Waxaa loo higgaadiyo lacagta waa.
"Waxaan run ahaantii jeclaan lahaa in aan yimaadaan," Waxaan si Leif yiri, wax yar nasiib daro iyo resignedly. "Laakiin ma aan awoodi karin safarka. Waxaan si fudud u haysan wax lacag ah. "
Tan iyo markii aan ahaa waqtigan ahaa shaqo la'aan, aan ku noolaa on xadad ah. Waxaan marnaba iga raaxeysan kartaa wax dheeraad ah. Waxaan lacag ka helay caymiska shaqo la'aanta, oo waxay u noqotay in ku filan oo kaliya in loo baahan yahay ugu yaraan. lix isbuuc kasta oo aan ahaa, si kastaba ha ahaatee, sabab qaar ka mid ah, oo ah lacag badan in yar. Waxa ay ahayd sabab u ah arrin countervailing, oo aan marnaba run ahaantii baadhi karin. Marka Leif loo sheegay in aanan awoodi karin, ayaa sheegay in uu weli aaminsan yahay caafimaad
"Wax dhibaato ah ma. Waxaan kuu diyaarin doonaa in. Waxaad ka heli safarka wax badan ka jaban, iyo kuwa kale ha ogaado. "
Waxa uu ahaa sababta oo ah safarrada in "dadka caadiga ah" raaci kari weyday. Waxay bixisay tigidhada naftooda, iyo si ay si ay u caawiyaan in siyaabo kala duwan ee shirarka ay awood ahaayeen. Waxay ahaayeen kuwo kale in ay la oo ay u duceeyaan dadka, inta badan in boqolaal, kuwaas oo u yimid oo doonayay in la badbaadiyey. Oo kuwaasu markay iswiidhishka caadiga ah sidoo kale dadkii u baryay kuwa buka, ay ka bogsadeen. Tani waxa ay ahayd a rumaysadka-dhismaha aad: Mid ka mid ah helay in si kale loo dhigo, si ay u noqon in xaqiiqda markii Ciise yaabab iyo calaamooyin: Sidoo kale, waxaan hadda ogahay in fasalka Bible Leif ee raaci lahaa oo ololahan ka qayb qaataan. Sidaas, waxay heshay fursad gaar ah in ay ku dhaqmaan wixii ay barteen dugsiga Bible. Waxay lahaa indhaha iyaga u gaar ah si ay u arkaan in ay ka shaqeeyeen in ay aaminsan yihiin in Ciise.
Leif Svensson sameeyey dadaal dhab ahaantii si ay u sameeyaan advertising wanaagsan u safrayaan, si aan raaci kari weyday. Wuxuu ii sheegay sida olole wanaagsan noqon lahayd iyo sida la yaab leh waxa ay ahaan laheyd inay u safraan gobolka doon rakaabka farshaxanka Stockholm dhiman. Waxaan sii joogi doono in qolalkii iyaga u gaar ah oo ku saabsan markabka iyo hadda aan iyo aad u badan waxaa u xiisooday. Ka hor inta aan dhamaaday wadahadalka Leif balan qaaday in uu soo diri lahaa macluumaad ku saabsan ololaha iyo sidoo kale buug yar oo fiican oo ku saabsan rakaabka raaxo iyo haybad by mail. Dhowr maalmood ka dib markii ay wada hadal waxaan maqlay tan iyo qolka fadhiga ballaaran sida ay weerar ku soo galay booska mail iridda dadkayga, iyo rugleyn ee wax soo degay dabaqa hoolka. Waxaan loola cararay aniga ii gaar ah? Ket ilaa albaabka The nadiif ah si aad u aragto haddii ay ahayd post in ay soo gaareen. Haa, waxaa ay ahayd on doormat ah. Waxaan doonayay inaan arko haddii warqadda macluumaadka ku saabsan safarka Estonia yimid. kale oo dhan mail waraaqaha, jaraaidka iyo advertising ahayd waqti this aan aad u xiiso badan. Si aad iga farxin, Waxaan helay baqshada weyn brown la Leif Svensson sida diraha.
Waxaan isla markiiba dooxay baqshadda brown aan farta murdisada sida mindi warqad marmar, ka baxay kooban oo helay waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan safarka amateurish sameeyey Estonia in Leif u soo diray igu. Indhahaygu waxay la soo qaadey goor si qurux badan, qoraalkaan ku soo dhaweeyo ku saabsan doon rakaabka raaxo weyn oo nagu soo qaadi lahaa in Estonia.
Waxaan bartay markab weyn Laabeen a dreamy. Kaarka waxaa ku qotonta oo laga soo qaatay kor ku xusan. Markabkan oo ahaa fog oo ballaaran halkaas oo la Tegay badda ku buluug ah oo leh bararin cad dheer ka dambeeya. Maxaa dhacaya haddii aan tegi karin leh. Maxaa biimayn ah waxa uu noqon lahaa, siyaabo badan.
Haa, run ahaantii waxaan rabay in la raaco, laakiin xanuun ee maskaxdayda markii aan kaliya naftayda waaniyey xaaladda dhaqaale aniga qudhaydu waxaan helay. Maxaa habboon in aan sameeyo? Well, laga yaabee waxa aan had iyo jeer loo isticmaalo in lagu sameeyo markii aan dhib ama wax u baahan dhex orday: barya Ilaah. Waxaan wada xodan yihiin, maxaa yeelay, jilbaha by sariirta qolka yar, taasoo ii ahaa alcove, iyo goorna Ilaah magaca Ciise. Ayaan waxaan isagii weyddiistay inuu lacagtii u baahan yahay safarka i siiyo. Oo marka aad Ilaah ka baryaynaa si aad u hesho jawaabaha salaadda - in qaab ama mid kale.
Waxaan dareemay in labada lamaane waayeel ah oo sidoo kale Christian ahaayeen saaxiibaday. magacyada waxay ahaayeen Ruth iyo Berndt oo lahaa dukaan si fiican u yaqaan hardware ee bartamaha Ljungby. Hadda ka dibna, in aan soo booqan doono loo isticmaalo. Waxaan mar walba dareemay soo dhawaanina in. Marna weligood ahaa waxaan diidday inay ku timaado markii aan albaabka ay u yeedhay. Oo waxaa dhacday arrin inta badan.
Waxay ku noolaa dhow ilaa munaaraddii kor biyaha, taas oo ahayd kur kaliya kor ku xusan xarunta. Waxay qaadatay ah oo ku saabsan labaatan daqiiqo ilaa socdaan in ay guriga leben brown. Markii aan booqday asxaabta, kuwaas oo had iyo jeer igu martiqaaday qaxwada iyo cookies halka aynu fadhiga brown qolka fadhiga qurux badan fadhiistay.
Waxaan inta badan wada daawan lahaa Christian videos. Wakhtigan, waxa ay qaadatay VCR marka waxaad arki lahayd movies pre-duubay on telefishanka. Ruth iyo Berndt ahaa run ahaantii dhaansan la filimada Christian ka ololayaasha iyo kulamada adduunka oo badan oo kala duwan. filimada The ahaayeen kuwo aad u xiiso badan oo iyana waxay lahaayeen la hadla caan ah. Waxaa markaas ruuxa iyo Jidh helay labada inay nolosha marka aad halkaas ka helay. Waxaan la hadlay oo dabcan ku saabsan Ciise, oo ku saabsan xaaladda ruuxiga ah ee Sweden.
Ruth iyo Berndt had iyo jeer lahaa wax badan in la sheego iyo sida degdegga ah. Sidoo kale waxaan lahaa wax badan oo qalbigiisa, sidaa daraadeed waxa uu inta badan noqon lahaa daahay marka aan la kulmay. Waxaan lahaa saddex dhan u muuqdaan in ay lumiso wakhtiga ula socoto. Sidaas waxa uu ahaa layaabna ma leh in inta badan uu habeen noqday ka hor inta aan guriga ku socday. Waxaan mar kasta u diyaarshay inuu habeen dheer markii aan booqday.
Mid ka mid ah fiidkii waxa ay ahayd markii booqasho kale u Ruth iyo Berndt. Waxaan ku socday out of qolkayga ee kaniisadda Pentecostal, gudbeen saldhiga tareenka, guud ahaan square ah ku socday, ka dibna kor u trudged buurta dheer. On top of buurta aan tan iyo munaaraddii biyo u soo jeestay bartayba gal jidka dhinac taas oo horseeday in ay guriga, ayuu kor ugu baxay tallaabooyinka dhagax gaaban oo buuqday gambaleelka.
Just albaabkii furay oo i salaamay sida set dhaweynayaa caadiga ah. Sida had iyo jeer, waxaan dareemay markan si diirran u helay by saaxiibaday. Waxaa dareemay si wanaagsan inay iyaga la joogaan. Tan iyo markii aan weli ahaa oo keliya waqtigan, waxa ka muhiimsan uu ahaa mid aan wax saaxiibo Christian wanaagsan in bulsho la.
Waxaan fadhiistay, sida caadiga ah, hoos fadhiga qolka fadhiga TV, bilaabay sheekaynta, daawaday filimada, hadlay, cabbay kafeega, daawaday filimada, hadlay ... In gaaban, waxa had iyo jeer ku sameyn jirnay markii aan la kulmay, iyo saacadaha soo duulay sida caadiga ah iska.
Waqti lagu jiro fiidkii dheer, waxaan bilaabay in ay ka hadlaan safarka, sida aan sidaa aad u badan damcay inuu u sii on.
"My macallinka Bible hore ee Kitaabka Quduuska ah maalintii Bentakostiga School ee Jönköping, Leif Svensson, ka dhigi doonaa xilli ciyaareedka cusub ee Yurubta Bari", waxaan u sheegay Ruth iyo Berndt.
"Waayo, Latvia mar kale?" Mar la weydiiyay Berndt halka uu cabbi jiray kabasho yar oo bunka iyo kor u calalin oo kibis ah.
Wuxuu ahaa isla markiiba xiiso wuxuu lahaa xiiso weyn wacdinta dalalka kale, gaar ahaan Bariga Yurub. video The flickered shaashadda TV-ga, laakiin hadda waxa uu ahaa lama filaan ah ma jiro oo naga mid ah waxay ahaayeen kuwo xiiso ku jira. safarka soo socda ahaayeen diiradda, iyo in ay xitaa qabtay dhegaha aan saaxiibada '. Waxay ogaa oo aan sameeyey noocyada kala duwan ee safarada ee la soo dhaafay oo waxay garteen sida badan safarada ee loogu tala galay la ii.
"Maya, dhiman in Estonia," Waxaan ku jawaabay su'aasha Smitty ee. "Waxa ay noqon doontaa halganka nooleynta anion weyn oo, si la mid ah sida ololaha aan ku ee Riga."
"Waxa xiiso leh" tabbed Ruth in halka iyana way ku shubtay kafeega more qaar ka mid ah in aan koob madhan. "Waxaad u iman doontaa?" Waxay la weydiiyay, haysta waqti isku mid ah ilaa saxan cake la ii sheegay in aan qaadi doono xitaa moofo ah kafeega cusub daadiyeen.
"Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa," Waxaan is-idhi, "laakiin waxaa jira sanayo yar. Waxaan si fudud u lahayn lacagta safarka, sidaa darteed aanan awoodin in ay tagaan. "
Waxaan u maleeyay in aan run ahaantii aan sameeyey, maxaa yeelay markii aan la soo dhaafay waxaa ku xusan. Labadan is qabay kuwaas oo lacag badan. Waxay qaateen dukaanka caanka ah iyo mashquul ku Ljungby. Laakiin waxaan loo isticmaalaa in lagu hadlo wax walba, sidaas daraaddeed waxaa runtii ma dawarsanayay on my qayb.
Waxaan sii waday in ay ka hadlaan wax walba, laakiin marka jalaska lahaa badh noqday ee la soo dhaafay laba iyo toban, Waxaan u maleeyay in si kasta in ay ahayd waqti si loo soo afjaro our Community. Wada hadalka sii waday in muddo ah ee albaabka hore ka hor inta aan ugu danbeyn kala qaybsamay.
Waxaan hoos ku socday buurta dheer iyo sidii caadiga ahayd lahaa views weyn ee xarunta gudcurka. Waddooyinka, guryaha iyo dukaamada si qurux badan Nuuri mugdi ah oo ay jidka ku soo laabto waxa aan guri u dhexeeya filimada ee magaalada iyo saldhigga tareenka.
Ka dib markii aan qaybsadeen habeenkaas u maleeyeen Berndt on wixii aan u sheegay oo ku saabsan safarka Estonia. Haddii aan rabay in aan tago safarka, laakiin ma aanan fursad u leeyihiin, sababtoo ah dhaqaale la'aan.
"Haddii mar kale Chris noo salaamaya ka hor safarka, waxaan siin doonaa lacag ka," ayuu Berndt qudhiisa.
Fikradahaan waan ogaa Dabcan wax ku saabsan. Berndt badan dambe ii sheegay in uu u socday in ay i siiyo lacagtii loo baahnaa, haddii aan dib ugu soo laabto ka hor safarka. Waxa la yaab ahayd in aan sameeyey.
Tani waxa ay ahayd qayb yar oo ka mid ah ka sarraysa ah iyo hanuun Ilaah. Waxaan ka codsaday lacag safarka, laakiin waxaan sidoo kale la weydiiyay inay naag u noqoto. Ilaahna wuxuu hadda ka shaqeeya si aan ugu dhakhsaha badan waxay leeyihiin lahaa fursad ay ku jawaab u heshid salaadda.
Waqtigaa la ii sheegay in shaqo la'aanta. lix isbuuc kasta, waxaan si aad u hesho lacag dheeraad ah ka caymiska shaqo la'aanta loo isticmaalo, iyo haatan waxaa mar kale ahayd markii. Taas waxaan lahaa gebi ahaanba la illoobay, laakiin markii aan la ii farta murdisada jeex jeexi baqshadda ka caymiska shaqo la'aanta furo ahay, waxaan arkay in ay ku riday lacag dheeraad ah waqtigan. Si kedis ah ayaan lahaa inaan aniga qudhaydu awoodi safarka ay ku tagayaan Estonia.
Laakiin wax ku dhacay ee maskaxdayda. Interest in safraya Estonia ahaa mar dambe ma ay jiraan. Waxa uu bartey waayay intii aan sugayay. Waxa ay ahayd mid aad u aamusan qalbigayga, waayo, xilli la qorsheeyay in dhiman. Waxaan u lahaa gabi ahaanba uma mar dambe u safraan Estonia.
Waxaan u sheegay saaxiibkay Tomas, oo iga soo kaxeeyey kaniisadda Pentecostal iyo ayaa igu badisay Ciise, ayaan hadda lahaa lacag dheeraad ah ee xisaabta. Wuxuu ogaa sida badan waxaan rabay in uu u safro Estonia, laakiin in dhaqaalaha ku riday hadlay a in aan giraangirta.
"Laakiin markaas waxa ay doonista Ilaah tahay in aad u tagto!" Waxa uu degna khaawi marka waxaan u sheegay warkii lacagta. marna aan jawaab waan illoobi doonaa marka aan grimly qaniintay, laakiin Xukuntay weyn ku jawaabay:
"Maya, ma aha."
Anigu ma aan runtii ma oga waxa aan sheegay. Waxaa u yimid oo kaliya bartey afkayga iyo bushimahayga. Halkan waxaan la dhibtoonaya oo codsaday in la ogol yahay in ay u safraan Estonia. Markii aan ugu dambayntii helay fursad, waxaan is-idhi, in aanay ahayn doonista Ilaah.
Hadda ka dib Waxaan fahamsanahay in ay dhab ahaantii ma ahayn igu yaa yiri. Waxa ay ahayd Ruuxa kuwaas oo ila hadlay oo igu dhex. Si aan si ha "ruuxa" ama kibiri, waxaan hoos isku qabnay, si kastaba ha ahaatee, waxa ay wax yar ay ku daray:
"Ma aan dareemin."
Waxaan ka fikiray, waxa ka fiican yahay in ay sidaas cocksure ka dhawaajisay. Laakiin ka dib markii war ah in arrinta la falanqeeyey dhamaadka. Thomas marnaba kor u qaadeen wax ka badan - oo aan midkood ma samayn. Wax dhacay in aan maanka ku saabsan ololaha ee dhiman. Waxaan jeclaan lahaa waxaa gebi ahaanba iska Suurka oo aanan dhab ahaantii u fahmi karaan.
Waxaan meel u safray wakhtigaas, oo aniguna waxaan ahay weligiis mahadisaan. Dabadeed, waxaan ku ogaaday in ay ahayd Ilaah oo jidka in uu igu soo hoggaamiyey jidkii a mucjiso.
Qof dumar ah oo dhallinyaro ah ee Linköping, oo kaliya dhowr bilood ka yar oo aan aniga ahayn, sidoo kale ku dhow inay safar la mid ah. Naagtan waxay lahaayeen, i duwan, koray ee qoyska ka mid ah Christian. Waxay sidan ku badbaadi oo mar hore u suurtagashay in ay ka shaqeeyaan sidii wax wacdiyi ah ee kaniisadda. A dhowr sano ka hor, waxay la kulmay Ciise cusboonaysiinta iyo hadda ku noolaa nolol loo qoondeeyey in ay Ilaah.
Qaar ka mid ah saaxiibada iyada lahaa muddo dheer isku dayay in uu iyada u saamayn in ay nagu soo biiraan on this safar cajiib ah oo adventurous sida waxa ay ka dhigantahay in ay yimaadaan Estonia. Laakiin iyadu ma ay ogayn hubaal sida ay samayn lahayd. iyana waxay daba geli lahaa ama inaan la siin? Waxay ahayd runtii laba maskaxda guriga in ay guri laba qol ee Linköping.
Oo miiska iyada oo jikada raaxo ahaa warqadaha isla saxda ah ee guriga safarka ila ah. Waxay lahaa dabcan nuqul ka mid ah qoraalkan ugu fiican oo ku saabsan dalaka rakaabka raaxo leh, taas oo muujisay markab weyn oo badda ku buluug ah oo leh dib cad ka danbeeya.
Waxaa, iyada oo guri, waxayna lahayd legdinta ah labadaba qofka iyo Ilaah. Sidee ayay u qaban karaa?
Mudo yar ka dib, waxaan hoos u lahaa in xarunta oo uu ku sameeyey kiis. On jidka guriga fiidkii in, ayaan soo xusuusan waxay si fiican, waxaan ku socday ee la soo dhaafay newsstand ah. Gaar ahaan mid ka mid ah headlines la dusin dadka kale ee soo baxay, waxaan u malaynayaa in ay tahay bartamaha saddex. Waxaan wax yar majoogto waxaa jiidanaysay markii aan maray dukaan ah. Headlines ayaa, waxa la xarfaha madow weyn waxay ahayd: "Ferry degtay ee Baltic ee habeenkii - in ka badan 800 dhintay"
Inkastoo löpsedeln ka cabsado oo naxdin leh, si aan u xusay oo kali ah. Malaha maxaa yeelay, waan la wareegay, in aanay ahayn oo dhan baa i taabtay, oo mar kasta ka dhaca meel kale oo aan ahayn "halkaan". Intaa waxaa dheer, waxaan u maleeyey fikrad qaldan, in aysan na saamayn doonto in Sweden, laakiin dadka iyo dalalka kale. Sida badan dadku oo aniguna ma aan ka yara duwan wakhtigaas. Marka shilal iyo masiibooyin dhacaan, waxa had iyo qof kale oo adduunka ah. Waxa aanu ka dhacaan Sweden iyo xitaa yar ka walaacsan waxaan ahay waxaa ka mid ah. Fikirka qariibsado, laakiin waxaa nasiib daro noqon kartaa.
Subixii xigay, waxaan aamusnaan fadhiistay oo wax bay cuneen quraac in aan jikada waxaan gelin in aan firida iyo rooti la salami intii aan absentmindedly dhegaystay war news raadiyaha ah.
RATHER ka hadlay musiibada weyn ee badda bari. Si lama filaan ah waxaan la xusuusiyay löpsedeln waxaan arkay habeen ka hor. doon A ayaa ku dheceen, iyo in ka badan 800 oo qof ayaa u dhintay. Waxaan bilaabay in ka badan dhagayso si taxadar leh. Wariyaha ayaa sheegay in doon ah ayaa soo socdo ka Estonia in Sweden dhexe ee habeenkii ka baxeen ayaa ka hooseeya hirarka badda.
Estonia? Laakiin waxaa la in Estonia, waxaan aadi lahaa on my safarka? Oo waxaa jiray in Leif Svensson ayaa u safraya iyo isagoo ololaha. Waxa uu sidoo kale qorsheysay in shirkad weyn in uu noqon doono. Waxaa intaa dheer, ku dhowaad dhammaan fasalka dugsiga Bible in la noqon.
fikirradayda mar kale kala gooyey markii RATHER soo noqnoqda magaca doon ah in tiimbadeen dabaqa badda, "magaca doon waa Estonia".
Si lama filaan ah waxaa gebi ahaanba aan diiradda oo u maleeyey haatisa: Estonia? Ma aha in ay doonnidii weyn loogu yeedhi jiray in noo qaadi lahaa in Estonia?
Waxaan joojiyay cunistiisa ii jajabi oo hoos gelin qaadada. Rooti la bolse dhibcaha ha igu noqon, oo hore baan u xootay, halkii raadinaya in raso wargeyska. Ka mid ah wargeysyada iyo reklarnblad waxaan doondoonay qoraalkan in ay si deg deg ah u hesho in la ogaado magaca markabka.
Waxa aan ahaa muddo dheer ka hor inta aan ka helnay. Ma aan cabsi baan eegay sawirka leh markabka Rafaa in kibir safray on badda ka xumbaynaya hirarka ka dambeeya. Indhahaygu hammuun baadhay magaca markabka, kaas oo ku qornayd warqadihii ay madow cad on doon ka weyn ayaa. Markabka ayaa ku bar sawirka runtii la odhan jiray Estonia.
Waxaan ku arkeen sawirka qoraalkan Quruxdii. News codka ma aan maqlay tan iyo xataa dambe. Waxa kaliya ee hadda jirey in aan maanka ku ahaa magaca markabka: Estonia. Waxaan u akhri marar badan. kibirka dalka yar Baltic ee M / S Estonia ayaa tiimbadeen ugu hooseysa. My saaxiib Leif Svensson iyo guutadiisa oo dhan ayaa laga yaabaa in ay ahayd on board. Oo weliba waxaan jeclaan lahaa ayaa sidoo kale ku lug lahaa.
Marka waxaa igu soo dhacday in ay dhab ahaantii wuxuu ahaa Estonia kuwaas oo dhacay, ilaa toted su'aalaha aad madaxa. Waxaan daqiiqad dheer miiska jikada fadhiistay oo ku arkeen qoraalkan yar amateurish advertising ah oo ku saabsan ololaha iyo qoraalka ka badan ayaa xirfad Estonia, hadda sida muuqata jiifa dhibkani talona bari. Ku dhawaad ​​dhalanteed iyo wax yar ka cawlan, waxaan arkay laba qoraalo inta aan isku dayeen in ay isugu sawirka wixii dhacay. fikirradayda u tageen inay Leif Svensson. Si lama filaan ah waxa uu i garaaco aan naagtiisa waa inuu, Sara wac. Waxay ku saabsan safarka ma aan tegi lahaa wakhtigan, iyada oo mararka qaarkood sameeyey. Waxay lahaa, iyo waxyaabo kale, raaceen by Riga safar la mid ah aan ku beegnaa kale ka mid ah. Laakiin waqtigaan la joogo, waxay u doortay inuu sii joogo guriga. I kiciyey my phone isku tidcan cas oo la wacay 036 tirada in Jönköping.
Kaliya calaamadaha yar oo dhici kara ka hor inta iyana waxay ugu jawaabtay. Malaha Sara fadhiistay oo maalintaas daawaday telefoonka, maxaa yeelay, waxay ahayd badan tahay in badan oo loo yeedhay, oo uu rabay inuu maqlo wixii dhacay. Leif lahaa saaxiibo badan oo aad ogaateen dabcan sidoo kale dad badan iyada oo ay hawshan. Sida xaqiiqada ah waxaa kaloo jiray qoysas badan oo ka mid ah ardayda kuwaas oo doonayay in ay raadsadaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kuwa ay jecel yihiin. Sara xaqiijiyay in Estonia ahaa markabka Leif iyo xisbiga oo dhan ku ahaa. Sidaas ayay tidhi xukun oo aan waligey illoobi doonin:
"Laakiin ma ahan in aan rajo aad u badan ..."
Waxay lahaa sidaas daraaddeed aan rajo lahayn in Leif ayaa nabdoonaa. Oo isagu ma uu samayn. Isaga iyo wadaad kale, Lennart Carlsson, oo ay la socdaan inta badan class Kitaabka Quduuska ah, inta kale ee xisbiga, iyo boqolaal ka mid ah dadka kale habeenkaas ayaa lagu dilay badda moolkeeda markii Estonia ee shan iyo toban daqiiqo degtay.
Aan ku fikiray oo ku saabsan dhacdadan ka badan hal jeer. Waxaan la yaabaa on board Estonia. Halkii ay ka soo socda oo ay la socdaan on safarka ay ku tagayaan Estonia, waxaan doortay in uu sii joogo guriga, maxaa yeelay, waan aadan "dareemaan" waxaa loogu talagalay.
Naagtii waxay ka Linköping, iyadoo jidka ag fadhida, la odhan jiray Marie, go'aansaday in qaar ka mid ah sababta ay u safraan Israa'iil ka roon tahay inaad Estonia - inkasta oo ay markii hore go'aansaday inaan ku biiro safar olole Leif Svensson ayaa.
Markii aan mar dambe ogaaday in aan xitaa ka sii badan sida cajiib ah oo Ilaah ayaa aniga iyo iyada keentay ogaaday.
Laga soo bilaabo buugga habeenkii ugu dheer ee Christer Åberg daabacay by Publishers Semnos . Cutubka 2aad: Journey la Estonia. Pages 25-36.